Sanikezela ngobuntu bethu kusini na kule Nkululeko – Masicinge? - Vernac News
Ngokubhalwe ngu: Mncedisi L. Maqhuzu |prengmncedisi@gmail.com
Sekuntsuku noko sitofuza ezants’ enzonzobila singumzi ontsundu ngokubanzi, ingakumbi ke xa sisiya kwizindlu zePhondo le-Mpuma Kapa, kweli lomdibaniso. Kwiinyanga nje ezimbalwa ezidluleyo – sikhankanya leya sele yabayinyanga yamasiko, izizithethe kunye nenkcubeko (esingathi ke xa sididiyela ndawo-nye yeyamagugu nobuntu bethu, eyoMsintsi okokutsho) phantse wonke ubani ukusuka kubantu ngokubanzi; uRhulumente desike kuye nakooPolitiki kwandlu-nkulu bekuhlatywa khwelo limbi malunga nokuvikelwa kobuntu kubantu babo ngelithi makugunyaziswe enye yeeLwimi zaseAfrika kumaziko aphantsi kweli lo Mzantsi. Kodwa ke, asikho apho.
Phantse kuyo yonke imibuzo ebendinga ingabuzwa xa ithuba lisekho, kukuba sikhululekile kusini na? Xa ke ngenene kunjalo sivuma ngokunokwethu ukuba sakhululwa kumadabi amandulo, kwadesike kwangena uRhulumente wokuqala womdak’ omnyama: ingaba isenzela ntoni na loo nkululeko singabantsundu? Okanye ke, thina bantsundu bugqubelo senza ntoni na ngaloo nto? Le yimitsoliso ebaliweyo kudederhu olunokuthi lubuzwe ngubani xa ejonga indlela esibuyekelela ngayo ubuntu bethu sisisizwe esintsundu kweli lomdibaso. Ukuba akuqondi kakuhle yiva xa utyelele kumanye ama-Phondo kwakulo Mzantsi – uyofika umdak’ omnyama waseMpuma Kapa engathethi kwasiXhosa. Phofu singayibeka bucala into yokusithetha xa kukho ongasazi kwakusazi, abe engenawo naloo mdlana wokuba angasazi. Xa ke sisekwiimeko ezilolo hlobo, noko ngathi kufanelekile khe sizigocagoce sizibuze: Ingaba sibutshikilela ngantoni na ubuntu bethu? Ibize kusiphuc’ ubuntu bethu kusini na le nkululeko?
Ze ndithi xa ndijong’ indlel’ esizisengela phantsi ngayo izici zethu buqu, ndikhumbul’ enye yeembongi kumachalazi namachelezi eengcibi kwiiLwimi zaKwa-Ntu xa isithi:
“Nibe kunikw’ inkululeko nayitshikilela;
Nibe kunikw’ inkululeko yaniqongqotha;
Nibe kunikw’ iinkolo zaseMzini zanihoboloza;
Nilugculela ngasini na uLwimi lwenu?
Nizingculela ngasini na nina bugqubelo?
Noko kunjalo, isiXhosa nezinye zezenu. Niyazenzisa.”
–Ngokucatshulwe kumbongo: (Lulwimi Lwethu, Kholekile M. Manciya)
Enye yezinto ezingumngeni kukuba imbali yabantsundu ayaziwa; kube kungekho bantu bangaphi babonakalisa umdla kuyo. Andithethi ngambali yooHitler noVerwoed bengcinezelo nawo ke onke amadabi amfamlibe wezizwe zabafikanisi namarhanuga – koko imbali yeli lethu ilizwe. Ndingathethi nangambali nje yeli, koko imbali ebhalwe sisizwe sethu iyibhalela ukondla isizwe kunye nezizukulwana ezisaya kulandela desike kuse nakugwece olungumgqeku weli lizwe. Imbali yethu sihamba siyiva emazweni, abantu bakuthi bathe zava ngathi badliwa ngumhlwa wempehla xa kuziwa ngakweyethu imbali – kubotshw’ amaxonya babaliwe kw’ abanomdla! Sisizwe esinjani na ukungabukhathaleli ngolu hlobo ubuntu bethu mawethu?
Xa siphila kweli xesha siphila kulo, apho uninzi lungasayikhathelelanga nganto imbo yethu, kufanelekile ukuba sivume, ukhona undonakele. Kwaye ukuba sivumile sizole cwaka tu, sakuphaphama sele singenayo konke-konke, sele sibaliselwa sifunda ngezinye izizwe nempumelelo yazo.
Nditsho nditsolise ndimi kweliza nomoya: uyintoni na umthi oqhakazayo ungenazingcambu? Siya phi na xa singazazi apho sisuka khona; kona kuyintoni le idala siyitshikilele ngolu hlobo imvelaphi yethu?
Ukwenza nje umzekeliso, kuMzantsi Afrika sinezindlu zobuKumkani ezingaphaya kwesi-7 ezahlukeneyo ezimele iimvaba-ngeemvaba zeli. Kodwa, uyofika ulutsha lwethu, phofu kunjalo nakwabadala, kungaziwa ngumntu nditsho eyakhe iKumkani. Xa siphila kwisizwe esinjalo kuyafuneka ke noko nto zakuthi sixhalabe. Ezona mfundiso ngemvelaphi yalo naluphi na uhlanga bekufanel’ ukuba ziqal’ ekhaya, umntu azazi yena buqu; andule afunde nzulu ngayo yonke ke imfundo elandelayo emva koko ngokuba ke kakade eyona nto ifunekayo yinkqubela phambili ukuze isizwe singatshabalali. Iyakhalazisa ke noko indima edlalwa ziinkosi zethu zomthonyama, ayonelanga tu kwaphela! Izikolo zona zixhomekeka kuRhulumente olawulayo, ngenxa yoko, asinakubeka chaphaza lingakanani ngenkqubo yazo.
Kwizinto ebekufanel’ ukuba ziyenziwa, bekufanele lonyuswe izinga labafundi abajongene nezifundo ezijonge ngqo embalini nakwiiLwimi zakwa-Ntu kumaziko emfundo ephezulu.
Bakho asele behlabe ngakumbi malunga nokugcina imbo yethu kunye nasekuphuculeni iiLwimi zakwa-Ntu. Singabala amachalazi namachelezi afana nooNjingalwazi uNcedile Saule, kuninzi. Kuyafuneka Iinkosi zime-nyawo-zombini ziqinisekise ukuba indima yazo iyafikelela ibonwe ngabantu ezibakhokheleyo ukuze kugcinwe imvelaphi yohlanga. URhulumente ophetheyo kunye namaziko emfundo aphakamileyo, noko kuyakhalazeka kwiiLwimi neMveli – ngamana lingonyuswa izinga leenxaso-mali malunga nokufunxa abafundi abaninzi kunye nokukhuthaza imfundo-enomsila kula masebe nanjengoko ubuntu bethu bulele kuwo, singawalibalanga ke amanye afana neSebe loBugcisa, Inkcubeko naMasiko.
Ibe ke phofu, ikho imibutho efana neeCONTRALESA ekufanele ilwe ngakumbi malunga nokugcina imbali kunye nokuyinwenwa ngakumbi; nokumemelela uluntu ekuyixabiseni ngokubonisa eyona nto ibalulekileyo ngemvelaphi yoluntu. Lingatshona liphume ukuba sithi sifuna ukuwakhankanya gqibe amaqumrhu abandakanyekayo, angangoboya benja – yeka nje ubuvila. Eyona nto ifunekayo kukuma nje kuliwe malunga nokubuyisela ubuntu bethu kuthi, kufundiswe ulutsha ezikolweni ngembali yalo kunye negalelo elaadlalwa ziinkosi zalo kumadabi amfamlibe. Ukwenjenjalo, sakuthi nokuba sihamba phi sele siqhakazile abokuhamba bacele kwezabantwana bejonge indlela esityebe ngayo. Intlabiso yona kuyachulumancisa xa kanti iyakhanya nakuRhulumente malunga nokuxelengwa kwabafundi ngembali yeli. Ewe kakade bekumele kube njalo xa isizwe sijolise empumelelweni ngokugqibeleleyo. Icekwa likuthi ke ngoko; abasemagunyeni kunye noRhulumente ekuqinisekiseni ukuba isidima nesithozela somdak’ omnyama siyabuyiselwa kubaniniso.
Nithanda ningathandi: iiLwimi zenu zezenu, amasiko wenu ngawenu; niyazenzisa nitshikilel’ imbo yenu nje! Ikhwelo lityala!
***** UMncedisi kaMaqhuzu ngumbhali osakhasayo, nosakhono sithe tsha kuluncwadi. Ngokobumi, uzinze kwiDyunivesithi yasEgoli apho abhenguza buphumeza khona kwimfundo yakhe enomsila kwezobuNjineli neNzululwazi; kodwa ephuma kwiPhondo leMpuma Kapa, eSiqhumeni, kwiilali zakwaBhala kwiSithili saseLusikisiki kwiSixeko saseMthatha.
Tagged Imvelaphi yethu, Inkcubeko NobuGcisa, Mncedisi Maqhuzu